थाङ्का कला प्राथमिकतामा नपरेकोमा कलाकारको चित्त दुखाई
काठमाडौं । नेपाल ललितकला पत्रकार समाज र तारागाउँ म्यूजियमको आयोजनामा हरेक महिनाको दोस्रो बुधबार हुने कलाका कुरामा यसपटक समाजले थाङ्का कलाका वरिष्ठ साधक मान बहादुर दोङसँग सम्वाद गर्यो । बेथान ७, रामेछापमा २०१४ सालमा जन्मिएका दोङले सानै उमेरबाट थाङ्कामा लागेको बताए । गाउँमा रहेको गुम्बाका भित्तामा रहेको चित्रबाट प्रभावित भएर गुरु डुप्चेन लामासँग थाङ्का सिकेको […]
Posted in देश,साहित्य / कला Read More »
कंगनाका कारण ऋतिक जेल जाने
रितिक रोशनलाई पक्राउ गर्न कंगनाको माग बलिउड अभिनेता रितिक रोशन र अभिनेत्री कंगना रनोटको विवाद झनै बढ्दै गएको छ । अभिनेत्री कंगनाले आफ्नो तस्विर र इमेल मिडियालाई दिएको भन्दै रितिकलाई पक्राउ गर्न माग गरेकी छिन् । कंगनाका वकिल रिजवान सिद्दिकीले ६ एप्रिलमा पुलिस आयु्क दत्तात्रेय पदसालगिरलाई एक पत्र पठाएर रितिकलाई पक्राउ गर्न माग गरेको भारतीय […]
​रेखालाई सबिन भन्छन्, “यहि जुनीमा मेरी बनन”
काठमाडौैं,२४ चैत । चलचित्र हमेशामा सबीन र रेखाको जोडी जमेको थियो । हमेशाले पाएको सफलताले सबिनलाई पनि धेरै फाइदा पुर्यायो । सिने क्षेत्रमा अन्य थुप्रै अवसरको सिर्जना भयो । चलचित्र रामप्यारीका लागि रेखाले हिरोको खोजी गरिन् । नयाँ हिरो भित्राउन चाहाने रेखाले आफ्नै दिदीको छोरालाई डेब्यु गराउने सोच गरीन् । तर, आफ्नो जोडीका लागि भने सबीनलाई […]
बलीउड अभिनेत्री प्रियंकालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको डिनर निम्तो
मुम्बई ,२२ चैत। बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले डिनरमा आमन्त्रण गरेका छन् । हाल हलिउड भासिएकी प्रियंका अमेरिकामै क्वान्टिको नामको टेलिश्रृखलामा व्यस्त छिन् । उनलाई सोमबार ह्वाईट हाउसबाट डिनरका लागि आमन्त्रण गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रियंकाका साथै ब्रेडली कपूर, लूसी ल्यू, जैन फोण्डा र ग्लैडीज नाइटलाई पनि ओबामाले डिनरका लागि […]
के साथी र सरदार उस्तै हुन ?
फुलको आँखामा फुलै संसार काँडको आँखामा काँँडा संसार भन्ने त सुनिएकै हो तर के साथी र सरदार उस्तै हु्न् र ? तपाईलाई के लाग्छ र? प्रगतिशील युवा साहित्यकार बलराम तिमल्सीना प्रस्न गर्छन् किन फूल र अंगार उस्तै उस्तै लाग्छ, लुटेरा र सरकार उस्तै उस्तै लाग्छ, किन प्यार र तरवार उस्तै उस्तै लाग्छ। प्रस्तुत छ गजलमा […]